नयाँ अवतारमा प्रितीको इन्ट्री ! गीतमा बिकृति भन्ने हुदैन ! राष्ट्रले कलाकारलाइ चिनेन – Samacharpati
नयाँ अवतारमा प्रितीको इन्ट्री ! गीतमा बिकृति भन्ने हुदैन ! राष्ट्रले कलाकारलाइ चिनेन
पाेखरा, १७ साउन । तीज गीत आए संगै धेरै कलाकारहरु ब्यस्त भएका छन् । यो समयमा मोर्डन होस् या पुराना गीत संगीत होस् सबै गीतहरुले चर्चा पहिरहेका छन् । कोरोनको डर त्रास हुदा पनि गीत संगीतले स्थान भने पाही रहेको छ ।
यहि कोरोनको समयमा प्रिती आले पोखरा आएको खबर प्राप्त भयो । कोरोनाको समयमा पनि आलेको दर्जनौ गीतमा स्वर पाइन्छ । काठमान्डौ मा बस्दै आएपनि पोखरा लाइ उनि आफ्नो गाउ ठान्छिन। मिलेर बस्ने ओल्लो पल्लो घरकाले सहयोग गर्ने रहेको छ तर काठमान्डौमा ब्यस्त भएका कारण वल्लो कोठाको मान्छे मरेर कुहिए पनि वास्ता नहुने प्रीतिको भनाइ छ।
ब्यस्त सहर अझ राजधानी सहर काठमान्डौमा भन्दा पनि उनि पोखरा आएर आफ्नो गीतहरु गरेको पनि उनले बताइन। ठाउले होइन श्रोत, साधन र दक्ष्यताले पनि मौका पाउनु पर्छ काठमान्डौमा भन्दापनि राम्रो गीत हरु यहि गर्न सकिन्छ त्यसैले मैले २र३ वटा गीतलाइ पोखरा बाट गर्ने निर्णय गरे। निकै चर्चामा रहेको पुरानो गीत ”फुल्यो बामरी मभोलि गहिहाल्छु बसे रामरी” भन्ने बोलको गीत को भाग २ पनि तयारीमा रहेको आलेले जानकारी दिईन।
कोरोना भाइरस संक्रमितलाई डेढ लाख भत्ता दिने सरकारी निर्णय !
महोत्तरीमा मिनीटिपरले ठक्कर दिँदा साइकलयात्रीको मृत्यु